Andefaso lohahevitra iray izahay - Victor Mochere
Alahady, Jona 26, 2022
Ny bilaoginay dia tranonkala fampahalalana fa tsy fifosana na oulet vaovao. Ny tena ifantohan'ity tranonkala ity dia ny fahazoana vaovao betsaka amin'ny Internet. Fampahalalana izay ho hitan'ny mpamaky fa ilaina mandritra ny folo taona izao. Raha misy lohahevitra tianao ho hita navoaka victor-mochere.com, fenoy eto ambany ilay takelaka etsy ambany. Azonao atao ny mameno ny takelaka im-betsaka, hevitra iray isaky ny endrika fotsiny. Handinika tsara momba ilay lohahevitra izahay ary hampahafantatra anao rehefa navoaka ilay lahatsoratra.
Fanamarihana: Raha te handefa lahatsoratra ianao, dia ampiasao aminay ny forme manoratra ho anay pejy. Raha tsy izany dia alefaso amin'ny alàlan'ny endrika etsy ambany ny fandefasana anao.
Fanolorana ny lohahevitra
Farito izay tianao ampidirinay ao amin'ilay lahatsoratra
URL loharano, raha misy, ho an'ny fanovozan-kevitra
Karazana hevitra inona izany?
Lohahevitra maika (mila manoratra ny lahatsoratra isika izao) Lohahevitra ankehitriny (mila manoratra ny lahatsoratra isika amin'ny herinandro manaraka) Lohahevitra evergreen (azontsika atao ny manoratra ny lahatsoratra amin'ny fotoana rehetra)
Afaka mifandray aminao ve izahay raha mila fampahalalana fanampiny?